• Page 268 of 290 • NEWS & ENTERTAINMENT
11/11/2018 L H 0
နတ်​ပြည်​မှာ.တည်​ထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲလား နတ်​ပြည်​မှာ.တည်​ထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲလား….. အမြင့်​ကြီးပဲ..““တိမ်တောင် တိမ်တိုက်တွေကြားက မုလအိဘုရား မုလအိတောင်““ ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့ အထင်ကရ နေရာတခု…. ကရင်ပြည်နယ်၊ ဒေသတွင်း အမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်ပြီး (၆၅၇၈)ပေမြင့်ပါတယ်။ မိုးရာသီမှာ သွားလာခက်ခဲပြီး ဘုရားဖူးအများစုက နွေဦးပေါက်စမှ သွားဖူးတာ များပါတယ်။ ကရင်ပြည်နယ်မြ၀တီ- ဝေါလေ-စုကလိ လမ်းကနေ သွားလို Continuous reading
ပြိုင်​ကားဝင်​တိုက်​၍ လူငယ်​ ၂ ဦး ​သေဆုံးသည့်​အမှုအပေါ် သေဆုံးသူတို့၏ မိသားစုဝင်​များရဲ့ သဘောထား နှင့် ယာဉ်တိုက်မှု CCTV မှတ်တမ်း
10/11/2018 L H 0
ပြိုင်​ကားဝင်​တိုက်​၍ လူငယ်​ ၂ ဦး ​သေဆုံးသည့်​အမှုအပေါ် သေဆုံးသူတို့၏ မိသားစုဝင်​များရဲ့ သဘောထား နှင့် ယာဉ်တိုက်မှု CCTV မှတ်တမ်း ပြိုင်​ကားဝင်​တိုက်​၍ လူငယ်​ ၂ ဦး ​သေဆုံးသည့်​အမှုကို ​ကျေ​အေး​ပေးမည်​ မဟုတ်​​ကြောင်း မိသားစုဝင်​ ​ပြော မန္တလေးမြို့ အောင်မြေ သာစံမြို့နယ် ကျုံးတောင်ဘက် Continuous reading
သူ့ဘဝနဲ့သူ ဟ … ဟိုကောင် ဝတ်တဲ့ခါးပတ်က ၁၄သိန်း အော် … ရူးနေတာ ငါသာဆို မဝယ်ဘူး အဲ့အစား… ရွှေလုပ်ဝတ်မှာပေါ့ “ဟျောင့် မတူဘူးလေ… လူဆိုတာ သူ့ဘဝနဲ့သူ ” “အခု ငါတို့ စားနေတဲ့ ဝိုင်းဘယ်လောက်ကျလဲ??? ” “၃ထောင် …. Continuous reading
ပျောက်ဆုံးသွားသောစည်းခမ်းမြို့တော် (သို့မဟုတ်) အင်းတော်ကြီးအိုင် သမိုင်း
ပျောက်ဆုံးသွားသောစည်းခမ်းမြို့တော် (သို့မဟုတ်) အင်းတော်ကြီးအိုင် သမိုင်း မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းက မိုးညှင်းခရိုင် ထဲမှာရှိတဲ့ အံ့ဖွယ်ထူးခြား လှပလွန်းတဲ့ “အင်းတော်ကြီးအိုင်”ဟာ မြောက်လတ္တီကျူ ၂၅ ဒီဂရီ ၅ မိနစ်နဲ့ အရှေ့လောင်ဂျီကျူ ၉၆ ဒီဂရီ၂၃ မိနစ်အတွင်းမှာ တည်ရှိပါတယ်။ အလျား ၁၆ မိုင် အနံ ၈ Continuous reading
မွေးကတည်းက သွားလေးချောင်းပါလာတဲ့ ကလေးကို ကျွန်မ မလိုချင်ဘူး ဒီကလေးကို သွားမြုပ်လိုက်ပါ
10/11/2018 လွှမ်းဝေ 0
မွေးကတည်းက သွားလေးချောင်းပါလာတဲ့ ကလေးကို ကျွန်မ မလိုချင်ဘူး ဒီကလေးကို သွားမြုပ်လိုက်ပါ နောက်ထပ် ထပ်မွေးပေးပါ့မယ် ဒီကလေးတော့ မယူပါရစေနဲ့ ဘီလူးနက္ခတ် ၁၉၈၀ ဝန်းကျင်ခန့်က ဖြစ်သည်။ တောင်ပေါ်ဒေသ၏ အေးချမ်းသော ရာသီဥတုအရှိန်က အရိုးကွဲမတတ် အေးလှသည်။ မီးလင်းဖိုလေးနဘေးတွင် မွေးကင်းစကလေးငယ်ကို ရင်ခွင်ပိုက်ပြီး မီးနေသည် ဇနီး၏ Continuous reading
တူပြိုင်ဂူလိုဏ် နှစ်လောင်းပြိုင် မသာတော်
10/11/2018 ynp 0
တူပြိုင်ဂူလိုဏ် နှစ်လောင်းပြိုင် မသာတော် ရေးသားသူ – ကိုရန်နောင်စိုး မန္တလေးမြို့ က ကြေးမြင်ကျောင်းကြီးဆီကို အကြိမ်ကြိမ်ရောက်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။ ပထမအကြိမ်ရောက်ကတည်းကပဲ သချိုင်းကမ္ပည်းစာကျောက်ချပ်တွေကပ်ထားတဲ့ ကျောင်းရှေ့ ကရေအ်ိုးစင်လေးကိုသတိပြုမိတာပါ ။ အစပထမမှာ ကမ္ပည်းစာတွေကိုဖတ်မိတော့ မင်းတုန်းမင်းကြီး သားတော် သမီးတော်တို့ရဲ့ အုတ်ဂူက ကျောက်ချပ်တွေဖြစ်တယ်လိ်ု့ပဲ သာမန်အားဖြင့်မှတ်ထားမိတာပါပဲ ။ Continuous reading
B သွေး ပိုင်ရှင်များရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား B သွေးများဟာ တစ်ယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးနေချင်ကြသူများဖြစ် ကြပါတယ်။ အားတဲ့အချိန်တိုင်းအခန်းထဲမှာတစ်ယောက်တည်း နေရင်း ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတတ်ပါတယ်။ သိပ်မခင်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ရင်ခပ်တည်တည်နေတတ်ပြီး အရမ်းခင်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ရင်တော့နားညဉ်းအောင်ပြောတတ်တာ B သွေးတွေပါ။ လူတိုင်းကိုမခင်တတ်လို့မာနကြီးတယ်လို့အထင်ခံရတတ်ပြီးပေါင်းကြည့်မှတကယ်ကိုရိုးသားဖြူစင်ကြတာပါ။ မိသားစုထဲမှာပဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းကြားထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုပိုဂရုစိုက် ပိုချစ်တာလိုချင်တတ်ကြပါတယ်။ အလိုလိုက်ခံရရင်လည်းအရမ်းပျော်တတ်ကြပါတယ်အရမ်းခင်တဲ့လူတွေအပေါ်တကယ့်စိတ်ရင်းမပါဘဲချစ်စနိုးနဲ့အနိုင်ကျင့်တတ်သလို ကိုယ့်ကိုအနိုင်ကျင့်ရင်လည်းအလျော့ပေးတတ်ပါတယ်။ ခဏခဏစိတ်ကောက်တတ်ပီးဘယ်သူမှပြန်ချော့စရာမလိုပဲအလိုလိုစိတ်ကောက်ပြေသွားတတ်တာလည်း B သွေးတွေပါပဲ။ Continuous reading
ဘူးချင်ကြဦး ကိုဖိုးသန် နဲ့ ရဲမျိုးတို့ နှစ်ယောက် အိမ်ပြန်လာတယ်။ လမ်းမှာ ” ဟေ့ … ရွှတ် ရွှတ် ” နဲ့ ခေါ်သံကြားလို့ ရဲမျိုးက လိုက်ကြည့်တော့ အမျိုးသမီး ချောချော တယောက် ကို တွေ့တယ် …. ။ သူတို့ Continuous reading
ပြေတီဦးနဲ့ သရုပ်ဆောင်ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြတဲ့ အင်္ဂလန်မင်းသမီး
09/11/2018 ynp 0
ပြေတီဦးနဲ့ သရုပ်ဆောင်ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြတဲ့ အင်္ဂလန်မင်းသမီး ရိုက်စား ဆိုတဲ့ မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ပြေတီဦး ၊ စိုးမြတ်သူဇာတို့နဲ့အတူ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန်မင်းသမီး Libby Jennings ကတော့ သူ့အနေနဲ့ မင်းသားပြေတီဦးနဲ့ သရုပ်ဆောင်ရတာ ဘယ်တော့မှ မပျင်းရကြောင်း၊ မင်းသားဟာ အရမ်းရီစရာလုပ်တတ်ပြီး သဘောကောင်းကြောင်းတွေ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ သူကတော့ Continuous reading
Facebook messenger မှာ ပို့ပြီးသားမက်ဆေ့ကို ပြန်ဖျက်နိုင်တော့မည်
Facebook messenger မှာ ပို့ပြီးသားမက်ဆေ့ကို ပြန်ဖျက်နိုင်တော့မည် Facebook ဟာ သုံးစွဲသူတွေ မျှော်လင့်စောင့်စားနေတဲ့ ‘Unsend’ Feature ကို Messenger App မှာ စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီး မတော်တဆပို့မိတဲ့ မက်ဆေ့တွေကို ပြန်ဖျက်နိုင်တော့မှာပါ။ အဆိုပါ Feature ဟာ မကြာခင်ထွက်လာမယ့် App Update Continuous reading
« 1 … 267 268 269 … 290 »